Itshati ebukhulu | Ivenkile yesitayile Rave
Yonke imilinganiselo eboniswe kwisikhokelo sesayizi ibhekisa kwimilinganiselo yomzimba hayi kwimilinganiselo yengubo.
Sebenzisa ubungakanani bethu apha ngezantsi ukumisela ubungakanani bakho. Ukuba kumda womda phakathi kweesayizi ezimbini, iyalela isayizi encinci yesitayile esikhulu okanye ubungakanani obukhulu bokulingana okulingeneyo. Ukuba imilinganiselo yakho yokuphalala kunye nokulingana kuyahambelana nobukhulu obuhlukeneyo obucetyisiweyo, yanda ubungakanani oboniswe ngumlinganiso wakho we-bust.
** Ukuguqula ukusuka kwisentimitha ukuya kwi-intshi, sebenzisa intshi enye = 1cm**
Isikhokelo sokuMlinganisa uMzimba
UMBHALI: Yenza umda kwindawo yonke egcweleyo yempuphuma kunye nakumagxa.
IWISHI Yenza umda ngeyona ndawo inciphileyo yencindi yendalo - ngaphezulu kwenkaba yakho nangaphantsi kwakho
IINGCEBISO: Yenza owona mgangatho ubanzi.
Sebenzisa itshathi yethu yesayizi yokufumana isinxibo sababhinqileyo besayizi baseMelika ngobukhulu beengubo, iiblazer, iziqengqe, iziketi kunye nokunye. Ukufumana ubungakanani obuchanekileyo, qala uthathe imilinganiselo yokugquma, inqulu kunye nentambo, nokuba ziisentimitha okanye iisentimitha. Xa unemilinganiselo, fumana ubungakanani obuhambelana kakhulu neziphumo zakho kwiitshathi ngaphezulu.
Usafuna uncedo ekukhetheni ubungakanani bakho? Qhagamshelana nathi shop@stylerave.com ngegama lemveliso.
Buyela kwisitolo seRowu